Vaovao - Fampirantiana fanontana sy fanontana iraisam-pirenena Hong Kong
Ny fampirantiana ny famoahana sy famonosanana iraisam-pirenena Hong Kong faha-7 dia sehatra fandraharahana mihaja sy tsy fahita firy ho an'ny indostria. Nanjary tetezana sy foibeny lehibe mampifandray ireo mpanome tolotra fanontam-pirinty sy fonosana amin'ireo mpanamboatra, mpanome serivisy ary mpivarotra manerantany. Eto, ireo mpampiranty dia hanome vahaolana isan-karazany amin'ny fanontana sy fonosana, ny fitaovana sy fitaovana farany, ary koa ny serivisy logistika, sns. Hanomezana ny mpividy avy amin'ny lafim-piainana rehetra ny serivisy fanontana sy fonosana hanomezana vahaolana marobe amin'ny vahaolana, hanampy orinasa hanatsarana ny sary sy ny hatsaran'ny vokatra, amin'izay dia hampitombo ny fifaninanana vokatra.
Ny tsena dia eken'ny indostria tsara, satria hita amin'ny fiakaran'ny vidin'ny fampirantiana sy ny mpividy. Nanomboka tamin'ny 2011, nahasarika fampirantiana 320 mahery avy amin'ny firenena sy faritra 8 ny fampirantiana, anisan'izany ny Hong Kong, China China, Alemana, Korea, Filipina, Singapore, Thailand ary Taiwan, izay nampisondrotra 22,8%. Miaraka amin'ny fanampian'ity sehatra iraisam-pirenena pudong sy varotra fampiroboroboana fampiroboroboana ity dia manantona ireo mpampiasa farany, mpandraharaha mpanonta pirinty, mpanonta, mpanamboatra, orinasan-tseranana ary orinasa mpamokatra entana amin'ny indostria samihafa. Ny isan'ireo mpividy nanatrika tamin'ny herintaona dia nihoatra ny 11000, fitomboana 6,4%, ary avy amin'ny firenena sy faritany 109.
Hongbang fonosana indray mandeha, miatrika an'izao tontolo izao, miatrika ny rehetra. Mba hanomezana anao ny serivisy matihanina indrindra sy ny vokatra avo lenta indrindra. Ny vokatray dia manarona ny sakafo, ny akora simika isan'andro, ny fanafody, ny agrochemicals, ny electronics, ny fitaovana fananganana ary ny saha hafa. Natokana ho an'ny fifehezana kalitao henjana sy serivisy ho an'ny mpanjifa misaina, ny mpiasanay efa za-draharaha dia misy foana hiresaka momba ny zavatra takinao sy hiantohana ny fahafaham-ponao. Na kely na lehibe, na tsotra na sarotra ny kaontinao dia aza misalasala mifandray aminay. Ny serivisy tsara sy ny kalitao afa-po dia miaraka aminao foana.